Ukuze lokho ngezinhloso prescribers "Laferobion" (amakhandlela)? Imiyalelo kanye izinkomba ukusetshenziswa kwaleli thuluzi izokwethulwa ngezansi. Siphinde ngikuxoxele onjani isakhiwo kukhona suppositories, uma unanoma yimiphi imiphumela emibi kanye contraindications, kungenzeka ukusebenzisa imithi ukwelapha izingane ezincane nokunye. D.
Ukwakheka isembozo izidakamizwa
Isizathu sokuba okusezingeni eliphezulu kusebenta oqabulayo lesi sidakamizwa "Laferobion"? Amakhandlela aqukethe yalolu ketshezi esebenzayo interferon womuntu. Futhi kule suppository zihlanganisa izingxenye ezengeziwe njengoba Vitamin C no-E, tocopherol acetate futhi tallow.
Zuza izidakamizwa kungaba iphakethe eyenziwe amakhadibhodi, ngaphakathi eyayinekheli 3 no-5 amakhandlela afakwe amaphakheji plastic.
Liyini ikhambi "Laferobion"? Amakhandlela unomsebenzi ophakeme namagciwane nilidle immunomodulating senzo. Zisetshenziswa ekwelapheni izifo ezihlukahlukene.
kusebenta High zokwelapha zomuthi ngenxa ukubunjwa yayo eliyingqayizivele. Suppository isici Active has antitumor futhi isenzo elwa namagciwane. Isakhi sokuzakhela interferon womuntu ayinayo imiphumela enobuthi emzimbeni.
Ngemva ukwethulwa suppository rectal yethulwa lonke uchungechunge ukusabela: Amaprotheni ashintshwe kwemiqondo iseli OAmaKristu ekwandeni kanye ukufanisana viral, kwandisa amasosha omzimba nokunye.
Kuyoze ugxile izidakamizwa "Laferobion" (amakhandlela)? Umhlahlandlela ithi ngemva kokuphathwa rectal emakamu esiphezulu izinto asebenzayo egazini waphawula ngemva 5-10 amahora. Ingxenye-ukuphila amahora 2-3 lisho.
Kungani akunikeze imithi "Laferobion"? Amakhandlela asetshenziswa ukwelapha eziyinkimbinkimbi izifo eziningi, okuyinto zibangelwa:
Ukusha Kwesibindi Kohlobo B igciwane (kungasetshenziswa yamafomu nokulinganisela ezinzima);
herpes amagciwane (kuhlanganise herpes izilonda iso lwamafinyila, samabhamuza ezithweni zangasese, izilonda abandayo esikhumbeni, ezimise okwama-tile, njll);
izifo okuxubile, webhaktheriya noma viral, kuhlanganise ebantwaneni ubuhlengikazi kuze kube inyanga eyodwa.
Kwezinye izimo, ngisho zisebenzisa suppositories "Laferobion"? Amakhandlela ebekiwe yokwelapha eyinkimbinkimbi umdlavuza futhi multiple sclerosis:
melanoma isikhumba namehlo;
kwasendaweni ezahlukene izimila, kuhlanganise wesibeletho, isinye, webele nezinso;
e Sarcoma Kaposi sika;
e myeloma amaningi;
Kungakhathaliseki ukuthi kukhona Izimo kule izidakamizwa "Laferobion 100000"? Regulations lebhalwe izidakamizwa, uthi lokhu izidakamizwa is hhayi Kunconywa ukusetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
ukungabekezelelani isici asebenzayo (IFN) nezinye izingxenye ekwakhiweni;
ebukhoneni isibindi ezinzima nesifo sezinso;
ebukhoneni inhliziyo ezinzima futhi izifo semithambo;
ngesikhathi ukucindezelwa hematopoiesis myeloid;
nge yegilo iziyaluyalu;
isithuthwane kanye nezinye izifo CNS.
Kufanele kuqapheleke futhi ukuthi lezi suppositories kuthiwa contraindicated ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa kanye lactation. ukuvinjelwa okunjalo ihlobene ukuntuleka zokwelapha.
Isikali futhi isicelo
"Laferobion" - suppositories rectal, okungase babelwe kokubili abadala kanye nezingane ezincane. Ngokuvamile, ezifana ejenti ukwelashwa imayelana 10 days. Kulokhu kwanele ngempela ukwenza uhlelo umuntu sokuzivikela inikwe amandla futhi umzimba waqala ukulwa nesifo.
Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi izidakamizwa kubhekwe unikezwa hhayi kuphela njenge-agent immunomodulatory, kodwa futhi njengoba elwa namagciwane futhi antitumor nomuthi. Ngakho-ke, umthamo yayo kufanele azimisele kuphela udokotela emva ngihlolwa (kuye ngohlobo nobukhali isifo ekhona).
Lapho iziyaluyalu premalignant wesibeletho, Human Papillomavirus ukutheleleka, exubile, izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane, kanye urogenital ukuxubana izifo adluliswa ngokocansi abantu abadala abakhuthele izidakamizwa ebekiwe 1 suppository (1.5 million IU) kabili ngelanga. Suppositories yanconywa ukufaka njalo ngemva kwamahora angu-12.
Kungenzeka yini ukuba ingane ukusebenzisa izidakamizwa "Laferobion"? Amakhandlela izingane ezinqunyiwe kuphela yokwelapha eziyinkimbinkimbi. Kid ifakwe suppository eyodwa (ayizinkulungwane 150. IU) njalo ngemuva kwamahora angu-12. Isikhathi salesi ukwelashwa kwaba izinsuku 5.
Ekwelapheni meningitis, SARS, inyumoniya of omsakazo ezahlukene kuvame ulahlekile Yiqiniso eyodwa. Njengoba for ekwelapheni izifo zibangelwa Epstein-Barr igciwane, kuleso simo udinga ukwandisa isikhathi of the Yiqiniso umthamo.
Bambalwa abantu bazi, kodwa "Laferobion" amakhandlela (500000-15000000 IU) kungenzeka imbangela nemiphumela engahlosiwe. Nokho, imiphumela emibi zenzeka kuqhathaniswa sishesha ngemuva kokuphela ukwelashwa.
Ngokusho imiyalelo, suppositories ezinjalo kungabangela ukusabela ezilandelayo:
thuthuva ubuthongo (ukozela, ukuqwasha);
Indlela ukuqeda le ukusabela ezingezinhle ezenzeka seziguli ezithola lesi sidakamizwa "Laferobion"? ochwepheshe lezivakashi bathi ukuze kuncishiswe lezi zimpawu kudingeka uthathe iphilisi "paracetamol".
Kufanele kuphawulwe ukuthi ngesikhathi yokwelapha isikhathi eside ngaphansi ukucatshangelwa kusho kungase ohlangothini imiphumela elandelayo zenzeka iziguli:
ukozela noma ukucasuka;
thrombotic futhi leykotsitopeniya;
ukulunywa noma ukuqubuka kwesikhumba ;
Ukuqhuma kwezintaba-mlilo herpetic.
Ngokusho izimpendulo iziguli usebenzisa suppositories, nezinye izinhlobo "Laferobion" ukulungiselela ezingase ziphakame bacindezeleke nokukhathazeka, futhi Ukudideka futhi epistaxis. Kulokhu, kufanele uxhumane nodokotela wakho ukuze uthole iseluleko.
It is hhayi Kunconywa ngesikhathi esifanayo ukhombe suppositories, kanye nezinye izinhlobo imithi "Laferobion" nge corticosteroids. Njengoba ukusetshenziswa ahlangene leli thuluzi nalawo neminye imithi, azikho Izimo ungekho.
Lapho usebenzisa i-ebulilini lesi sidakamizwa "Laferobion" isiguli ingaqala ukuphazamiseka nohlonze ukwazi, prostration ngisho ukucobeka. Ngokusho kochwepheshe, lezi uthi awushintsheki futhi abaphindela ngokushesha emva ukumisa ukusetshenziswa kwezimali.
Kuze kube manje, akazange wafunda umphumela lesi sidakamizwa "Laferobion" isivinini ukusabela psychophysical kanye nokwenzeka ukuphathwa komgwaqo futhi izakhi eziyinkimbinkimbi. Futhi, akukho idatha Ukungena okungenzeka izidakamizwa ubisi lwebele. Kule ndaba, suppositories enjalo Kunconywa abesifazane ngesikhathi lactation.
Ngaphambi kokusebenzisa leli thuluzi, qiniseka ulandela imiyalelo afakiwe. Wawuthi ngesikhathi le ndlela yokwelapha "Laferobionom" sinqatshiwe ukusebenzisa noma isiphi iziphuzo ezidakayo.
Amakhandlela Bheka "Laferobion": ukubuyekezwa kodokotela kanye neziguli
Njengezinye izidakamizwa esekelwe interferon, suppositories "Laferobion" kaningi ngaphansi ukugxekwa kusuka odokotela abaningi nodokotela bezingane. Ochwepheshe bavune umbono wabo omubi kule nomuthi ukuthi ukusetshenziswa kwalo njalo kungaba kakhulu ukunciphisa impendulo womuntu zemvelo ekulweni amagciwane. Phela, noma ubani akuyona imfihlo ukuthi izifo umzimba ngokwawo uthela lemali edingekile of interferon. Nokho, lokhu kusebenza kuphela ekwelapheni SARS.
Ngokuphathelene izifo ezingathi sína noma igciwane sina ngawo umuntu akakwazi ukubhekana bebodwa, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kokubuyekezwa, ezingaphezu kuka kuthethelelwe.
Uma sicabangela lokhu okungenhla, kufanele kuphawulwe ukuthi amakhandlela "Laferobion" hhayi Kunconywa ekuvimbeleni izifo ngoba umzimba ongathatha isinqumo sokuthi yini ukukhiqiza interferon ke akusadingeki, okuyoholela nemiphumela ngisho idumela.
Njengoba for iziguli, bona wazi nekusebenta okusezingeni eliphezulu zomuthi, ikakhulukazi maqondana nabantwana. Nakuba abanye abantu bakhononda ngokuthi lokhu kusho ngempela ngokuvamile kubangela ukusabela ezingezinhle.
Futhi, iziguli uthole izidakamizwa "Laferobion" eqolo. Over 10 suppository (1 MU) kuzodingeka akhokhe ruble Russian mayelana 700.
Bright asymmetry - ukugunda izinwele ngoba natures ashukumisayo